China Extruder Automatic Machine polymer PTFE Rod Ram PFB150 Dia 80mm-150mm Mpanamboatra sy mpamatsy | SuKo
Extruder Machine milina polymer PTFE Rod Ram PFB150 Dia 80mm-150mm
Manaraka: 1/2 Inch PTFE mifangaro tubing / Black Black
ny REEMA HARFOUSHI :
Ny vidin'izy ireo dia tsara ho an'ireo entana izay tsy azonao eny rehetra eny. Tena afa-po tamin'ny zavatra novidiko tamin'izy ireo aho.
ny wuxin :
Hatreto dia afa-po izahay amin'ny fotoana mitarika maharitra amin'ny zavatra sasany. Mila vokatra bebe kokoa avy amin'ny EU aho.
1 2 3 … 5 Manaraka "